VOLVO -Z5148 ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက် China OEM 30639780 နှင့် 30639781 CONTROL ARMS | တန်ဂူရီ
VOLVO -Z5148 အတွက် OEM 30639780 နှင့် 30639781 CONTROL ARMS
ထိန်းချုပ်သောလက်နက်သည်သင်၏မော်တော်ယာဉ်ရပ်ဆိုင်းမှုနှင့်ကိုယ်ထည်အကြားဆက်သွယ်မှုနှင့်မဏ္pointိုင်အမှတ်နှစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်စတီယာရင်လက်ကိုကိုယ်ထည်ဘောင်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်း၊ လက်မောင်းများကိုထိန်းချုပ်ထားသည့်ဘောလုံးအဆစ်များနှင့်ဘုရ်ှအားမှန်ကန်သောဘီးခြေရာခံနိုင်မှုနှင့်အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းရန်တွဲဖက်အလုပ်လုပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ယာဉ်အနိမ့်ထိန်းချုပ်မှုလက်မောင်းသည်ယာဉ်ရွေ့လျားနေစဉ်ဘီး၏ longitudinal နှင့် lateral အနေအထားကိုသတ်မှတ်ရန်ကူညီသည်။
Control arm များသည်အရှိန်မြှင့်ခြင်း / ဘရိတ်ခြင်း၊ လှည့်နေစဉ်ထောင့်မှန်ခြင်းနှင့်ယာဉ်ကိုယ်ထည်အလေးချိန်စသည့်များစွာသောဝန်အင်အားများကိုခုခံတွန်းလှန်သည်။ သူတို့ကအစပြောင်းလဲနေသောဘီး alignment ကိုထိန်းသိမ်း၏နောက်ထပ် function ကိုရှိသည်။ ၎င်းသည်မလိုလားအပ်သောဆိုင်းထိန်းစနစ်ကိုခုခံနိုင်သည့်အပြင်ထုတ်လွှတ်သောဆူညံသံ၊
Suspension configuration (Multi-Link, MacPherson, Double Wishbone) ပေါ် မူတည်၍ control arm များသည်အထက်နှင့်အောက်အနေအထားနှစ်ခုလုံးတွင်ရှေ့နှင့်နောက်ဆိုင်းထိန်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။
အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလက်နက်ဤမျှလောက်ကြီးသောစေသည်? Tangrui သည်ကျွမ်းကျင်သူများအားထိန်းချုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းတိုင်းကိုတီထွင်ခြင်းအားဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်၊ ဘောလုံးအဆစ်များနှင့်ဘုရ်ှကိုကြိုတင်တပ်ဆင်ထားသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းချုပ်မှုတပ်ဆင်ရန်အချိန် ၃၀% လျော့နည်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများသည်သက်တမ်းပိုရှည်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အစိတ်အပိုင်းများကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်တည်ဆောက်ရန်ပိုမိုအာရုံစိုက်သည်။ ကြာရှည်ခံမှုစစ်ဆေးခြင်းကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းဖြင့်သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်မှုကိုရရှိရန်ဒီဇိုင်းအသစ်တိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုသည်။
ရှေ့ ၀ င်ရိုး၊ လက်ဝဲ၊ အောက်ပိုင်း VOLVO XC90 [03-11]
ရှေ့ရိုး, ညာ, အောက်ပိုင်း VOLVO XC90 [03-11]
OEM NO ။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် VOLVO အတွက်
ရှေ့သို့ Mazda -Z5147 အတွက် OEM BS1A-34-350 BS1A-34-300 CONTROL ARMS
နောက်တစ်ခု: HYUNDAI SONATA-Z5149 အတွက်အရည်အသွေးမြင့်ထိန်းချုပ်မှုလက်နက် OEM 54500-3S000
OEM TD11-34-300B နှင့် TD11-34-350B CONTROL ARMS ...
Tangrui အတွက် ...
အရည်အသွေးမြင့်ထိန်းချုပ်မှုလက်နက်များ OEM 54500-3S000 ...
Volkswagen Passat-Z အတွက် 8E0407510A Control ARMS ...
Shock Absorber Bolt သည်, ဘီး Hub, Shock Absorber Rubber, ရှေ့ ဦး စွာစတီယာရင်လက်, တာယာဘောလုံးပူးတွဲ, ပါးပျဉ်း Shock Absorber,